Budata Bitdefender Adware Removal Tool maka Windows
Budata Bitdefender Adware Removal Tool
Free Budata maka Windows (44.50 MB)
Budata Bitdefender Adware Removal Tool,
Ngwá ọrụ mwepụ ngwa ngwa Bitdefender bụ ngwa nchekwa na-achọpụta ma na-ewepụ adware, ngwa ọrụ achọghị na mgbakwunye ihe nchọgharị, ngwanrọ ọjọọ nke na-emetụta Windows PC gị, ị nwere ike budata ma jiri ya nefu. Ngwaọrụ a, nke na -achọpụta ma na -ewepụ adware mgbe obere nyocha, achọghị nrụnye.
Ana m akwado gị ka ị jiri Ngwa mwepụ ngwa ngwa Bitdefender ma ọ bụrụ na ị nọ na nsogbu na adware (Adware) na -arụ ọrụ nime sistemụ, dị ka igosipụta mgbasa ozi na kọmputa gị, na -eduzi gị na webụsaịtị mgbasa ozi mgbe ị na -achọ Google, yana ịnakọta data. Ngwa a dị obere, nke ị nwere ike ibudata ma jiri ozugbo, ọ bụghị naanị nyocha sistemụ gị wee mata gị mgbe ọ hụrụ sọftụwia ọjọọ ọ bụla; na -ewepụ malware kpamkpam na sistemụ gị. Ọzọkwa, ịkwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ karịa ịmalitegharị kọmputa gị maka nke a.
Site na ngwa iwepụ Bitdefender Adware, ngwa nchekwa echekwara ka ọ rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows niile site na Windows XP ruo Windows 10, ị nwere ike ihichapụ adware nime naanị usoro 3 na -enweghị mkpa maka ihe ọmụma ọ bụla. Noge a, ọ ga -amasị m ikwu maka otu akụkụ nke ụgbọ ala nke masịrị m. Ngwa ndị nwere adware nihi i scanomi adịghị ewepụ na -akpaghị aka. Kama, ngwa ndị dị ize ndụ na -apụta dị ka ndepụta ma ị nwere ike wepu ndị ịchọrọ. Nụzọ dị otu a, ngwa gị nke ị na -eji ugboro ugboro mana ọ na -egosi dị ka adware anaghị ehichapụ na sistemụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa nke ị ga-eji wepu adware nke dakwasịrị na kọmpụta gị megide ọchịchọ gị, ana m akwado gị ka ibudata ngwa iwepụ Bitdefender Adware, nke na-eji teknụzụ Bitdefender na-emeri, na Windows PC gị.
Bitdefender Adware Removal Tool Ụdịdị
Nha faịlụ: 44.50 MB